नेपालीको लागि आयो खुसीको खबर: सरकारले असार २५ सम्म २ करोड डोज खोप ल्याउने, कहाँबाट कति आउँदैछ ? - News20 Media
May 28, 2021 N20LeaveaComment on नेपालीको लागि आयो खुसीको खबर: सरकारले असार २५ सम्म २ करोड डोज खोप ल्याउने, कहाँबाट कति आउँदैछ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो आसर २५ भित्र कोरोना भाइरसविरुद्धको २ करोड डोज खोप ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार २५ भित्रै २ करोड डोज खोप ल्याउनको लागि पहल र प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
अर्को हप्तादेखि खोप आउनु शुरु हुने मन्त्रालयले बताइएको छ । चुनाव घोषाणा धएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भोटका लागि खोप अनिवार्य भन्दै आममानिसले खोप मागिरहेको प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव भएपनि नभएपनि खोप सबै नेपालीको अधिकार भएको र पाउने बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय खोपका लागि राष्ट्रपति समेत सक्रिय भएकी छन् । उनले बुधवार आफ्ना समकक्षिहरुलाई पत्राचार र टेलिफोन वार्ता गरेकी छन् । चीनसँगको वार्ता लगतै चीन सरकारले १० लाख डोज खोप तत्काल नेपाललाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । उक्त खोप एक हप्ता भित्र नेपाल आईपुग्ने काठमाडौंस्थित चीनीयाँ राजदुतावासले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार चीन सरकारबाट १० लाख डोज, अमेरिकी सरकारबाट १० लाख डोज र बेलायत सरकारबाट २० लाख डोज खोप अनुदानमा आउन लागेको छ । त्यससँगै सरकारले अमेरिकासँग ५० लाख डोज, बेलायतसँग ५० लाख डोज, चीनसँग २० लाख डोज, रुससँग २० लाख डोज र भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद गर्न पत्रचार गरिसकेको र प्रक्रिया शुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नर्वेलगायत अन्य देशरुसँग पनि निरन्तर समन्वय भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य आपतकालिन अध्यादेशपछि अस्पतालहरुको लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको मन्त्रालयले हाल अक्सिजनको समस्या समाधान गर्दै गईरहेको जनाएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को उपचारका लागि १५७ वटा अस्पताल छुट्याएको र ४५ निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म कोरोना उपचारका लागि ४७ करोडको शोधभर्ना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।